Magaalo aan guryahooda laheyn wax albaab ah Bal Tuug Miyaa u dhici karaa (Warbixin) | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Layaabka » Magaalo aan guryahooda laheyn wax albaab ah Bal Tuug Miyaa u dhici karaa (Warbixin)
Magaalo aan guryahooda laheyn wax albaab ah Bal Tuug Miyaa u dhici karaa (Warbixin)
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 18-07-16 5:36 PM Yaab Magaalo ka Tirsan waqooyiga dalka Hindiya oo lagu magacaabo, Shani Hignabur, ayaa dadka ku dhaqani aaminsan yihiin, in guryahooda aan la xadi Karin oo uu ilaalinayo sanam ay aaminsan yihiin oo lagu magacaabo Shani.
Magaaladan ayaa guryaheedu ayaa albaabo lahayn wax kastaana ay u dhex yaalaan dadka ku dhaqan, waxaanay ka tagaan isaga oo iska balaqan, sida ay ku warantay wakaalada wararka Faransiiska ee marka la soo gaabiyo lee yaqaan (AFP), waxa guri walba dadkiisu ka shaqo tagaan isaga oo balaqan sababtoo ah? Markii hore ee la dhisayayba looma samayn albaab, oo xitaa habeenkii waxa ay seexdaan isaga oo iska banaan.
Guri ay war fidiyeenadii diyaarinayay warbixintani si gaar ah u doorteen ayaa haweenaydii deganayd ka baxday wakhti ku beegan aroornimadii hore, ama saacad uun ka dib markii carruurteedu tageen dugsiga, ninkeeduna u shaqo tagay beertiisi ayay iyaduna hore ka qaadatay saladii ay ku soo adeeganaysay ee ay suuqa ula boqooshay, waxa gurigan hor mara jid ay magaalada ka soo galaan beeraleyda iyo dadka miyiga ka soo gala.
Laakiin ma dhacdo in laga xado, dahabka iyo lacagta ay ku ritaan quruuradaha iyo sanduuqyada yar yar ee aan quful iyo wax xafida lahayn, waxaanay sawireen wariyayaashii war bixinta diyaarinayay lacag ay quruurad yar oo sida jooga oo kale ah oo ay gabadhani ku ridato lacagta masaariifta bilaha ah ee qoyskaasi haysto, taas oo dul saaran kabadhka cuntada oo meel waddada soo eegaysa soo yaala, wax albaab ah oo u xidhana aanu jirin.
Haweenaydan oo lagu magacaabo, Jayahari Gadi, ayaa markii ay soo noqotay u sheegtay wakaalada wararka ee (AFP), in aan laga xadayn gurigeeda, markii ay waydiiyeen sababta iyo cida u ilaalinaysana? Waxay tidhi, “Waxa ilaalinaya Illaahayaga Shani, kaas oo haddii wax khalad ah cidi gaysato ama xatooyo ay isku daydo, riyada noogu sheega cidii xaq darada samaysay.”
Haweenaydan iyo dadka Magaalada ayaa marka la waydiiyo sababta ay guryahooda albaabada ugu samayn waayeen, u sheega dadka in Sanamkan ay aaminsan yihiin ee Shani uu riyo ugu sheegay dadka rumaysan in guryahooda aanay albaabo u samayn oo uu isagu u ilaalinayo.
Sida waaxda garsoorka ee dalka Hindiya sheegtay, magaaladan muddo nus qarni ah lagama diiwaan galin wax tuugo ah, mana dhicin in qof tuug ah boolisku ka soo qabto magaaladaas, waxaanay taasi ka dhigaysaa in magaaladani aanay lahayn Albaabo, sidoo kalana aanay lahayn tuug xada guryaha.